Right shares(Right shares) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
जनरल इन्स्योरेन्सले ३०% हकप्रद जारी गर्ने, बीमा समितिसँग स्वीकृति मागिने
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत जेठ ६ गते बसेको बैठकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय हो। यसका लागि नियामक निकाय बीमा समितिसँग चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति लिने बैठकले निर्णय गरेको छ। बीमा...
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई आज जेठ ६ गतेबाट हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ। नेपाल फाइनान्सले चुक्तापुँजीको ७० प्रतिशतले हुन आउने हकप्रद निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल ३४ लाख ५४ हजार ४७४.२७५० कित्ता हकप्रद जारी गरेको छ। यो हकप्रदमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति...
राधी विद्युत कम्पनीले रु. ९५.३५ करोडको हकप्रद जारी गर्न सेबोनसँग माग्यो अनुमति
काठमाण्डौ । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले गत वैशाख २८ गते सेबोनमा हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै सेबोनमा आवेदन दिएको हो। सेबोनले अनुमति दिएमा यो कम्पनीले १ः१.४७५२ अनुपातमा ९५ करोड ३५ लाख ७६ हजार ९९ रुपैयाँबराबरको हकप्रद आफ्ना...
राधी विद्युत कम्पनीले पनि पायो हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति
काठमाण्डौ । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ। विद्युत नियमन आयोगले राधी विद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिएको हो। कम्पनीले आयोगसमक्ष चुक्तापुँजी ६४ करोड ६४ लाख ४ हजार ६२२ रुपैयाँको १ः१४७५२ अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको थियो। आयोगले यो कम्पनीलाई आज वैशाख २७ गते...
यी दुई जलविद्युत कम्पनीले पाए हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति
काठमाण्डौ । दुई जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएका छन्। विद्युत नियमन आयोगले ङादी ग्रुप पावर र बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो। आयोगले ङादी ग्रुप पावरलाई चुक्तापुँजी ७० करोड ६९ लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँको १ः१.५ अनुपातमा अर्थात १५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि...
नेपाल फाइनान्सले जेठ ६ बाट हकप्रद जारी गर्ने, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले भर्न पाउँछन् ?
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई आउँदो जेठ ६ गतेबाट हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। नेपाल फाइनान्सले चुक्तापुँजीको ७० प्रतिशतले हुन आउने हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको हो। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल ३४ लाख ५४ हजार ४७४.२७५० कित्ता हकप्रद जारी गर्नेछ। यो हकप्रदमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र...
अपी पावरको हकप्रद भर्न भर्नुभयो ? आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको हकप्रदमा आवेदन दिन आज वैशाख १५ गते अन्तिम दिन रहेको छ। अपी पावरले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि गत चैत २५ गतेबाट हकप्रद सेयर जारी गरेको छ। अपी पावरको हकप्रदमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीले हाल कायम चुक्तापुँजी २ अर्ब ७५...
कहिलेसम्म कायम सेयरधनीहरुले नेपाल फाइनान्सको हकप्रद भर्न पाउँछन् ?
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ यही वैशाख २१ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ वैशाख २० गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो कम्पनीको हकप्रद सेयर भर्न योग्य हु...
हकप्रद सेयरबापतको रकम जम्मा गर्न नेपाल फाइनान्सको आग्रह
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्सले कम्पनीका सञ्चालक र आधारभूत सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयरबापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सञ्चालक तथा आधारभूत सेयरधनीलाई आफ्नो हकहिस्सामा पर्न आउने हकप्रद सेयरबापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो। सञ्चालक तथा आधारभूत सेयरधनीहरुले उक्त...
आजबाट अपी पावरको हकप्रदमा आवेदन खुला
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि आज चैत २५ गतेबाट हकप्रद सेयर जारी गरेको छ। कम्पनीले हाल कायम चुक्तापुँजी २ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख १५ हजार ५४५.७५ रुपैयाँको १ः०.३९३६३२९२६ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेको हो। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल १ करोड ८ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गरेको छ। �...
शिखर इन्स्योरेन्सको हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रदमा आवेदन दिने आज चैत २१ गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत चैत १ गतेदेखि आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले अर्थात १ः०.३ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल ५२ लाख ७५ हजार ५७२ कित्ता हकप्रद...
धितोपत्र ऐनविपरीत अपी पावरको हकप्रदको प्रचार गरेको गुरु न्यौपानेमाथि आरोप
– अनत्य सुन्दर काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनीले जलविद्युतमा मात्र नभएर सोलर र कृषिजन्य क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आएको छ। अहिले अपी पावर कम्पनीले माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत निर्माण गर्दै गरेकाले कम्पनीलाई थप पुँजी आवश्यक परेको छ। झन्डै ७४० करोड रुपैयाँ पुँजीमा ५१८ करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण र बाँकी रकम भने सेयर धनीबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य...
मूल्य समायोजनपछि अपी पावरको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजना अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता अपी पावरको ३६३.२७ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता अपी पावरको ४६६.९० रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयर...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हकप्रदमा आवेदन दिने आज चैत १३ गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत फागुन २२ गतेदेखि आफ्ना सेयरधनीका लागि हकप्रद निष्कासन गरेको छ। यो हकप्रदमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। आइएमई समूहको मुख्य लगानी रहेको...
आजसम्म कायम सेयरधनीले अपी पावरको हकप्रद भर्न पाउने
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन योग्य हुन आज चैत १३ गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि भोलि चैत १४ गते बुक क्लोज गर्दैछ। यसको अर्थ आज चैत १३ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो कम्पनीको हकप्रद भर्न योग्य हुनेछन्। कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि यही चैत २५ गतेबाट हकप्रद सेयर जारी...